Jikelele - Inc Magible Mag
Dlulisa amehlo kusigaba
Ungakutholaphi Okuphakelayo Okuhamba Phambili Kwamaphrinta Angu-Offset?
by U-Anuj M
Uma uku inkampani yokuphrinta noma ucabanga ukuba yilungu lomgodi wesikweletu, kubalulekile ukwazi zonke izindlela ongazenzela umsebenzi wakho ngazo. Ukuphrinta Kunikeza Ngokushesha kuhlonishwa ngendlela ephumelelayo ongathenga ngayo…
Njengoba Izikhathi Zonyaka Zishintsha, Kanjalo Nengubo Yakho Yokugqoka
Abantu abaningi, abaningi emhlabeni wonke bayashintshana futhi bashintshe ikhabethe labo ngezikhathi ezithile zonyaka. Ezimweni eziningi, lokhu kuzosho ukuthi umuntu ususa izingubo ekhabetheni lakhe aziyise endlini ephakeme noma eyisipele futhi akhiphe izingubo zakhe zesizini ezayo azigcine. Lapho lokhu…
Izindawo Ongazivakashela e-Dehradun!
Uma ufuna ukuhlola iziteshi zamagquma, le ndawo ayikwazi ukuphuthelwa. I-Dehradun idume ngezinsiza zemvelo, amagquma nezikole ezaziwayo okuhlalwa kuzo. Inhloko-dolobha yase-Uttarakhand itholakala endaweni ephansi ye-Himalayas eSigodini saseDoon. Izungezwe yi...
Ngenkathi wenza ubhasikidi wezithelo uphazamisa, kufanele wazi ukuthi yiziphi izithelo ezicebile futhi ezinempilo. Ukubeka izithelo ezingavamile kubhasikidi we-hamper kuzongeza ubuhle esiphweni sakho. Nalu uhlu lwezithelo okufanele uyengeze kanye nezizathu futhi. Amapheya aluhlaza:...
THOLA AMANDLA OKUSOLULA NGOBUSUKU NGEZINDLELA EZINGAVUMELANI
Kusukela kudala isintu besilokhu sinelukuluku lokuthola amandla elanga ebusuku. Basebenzise izindlela ezithile futhi baklama izinqubo ezithile ngenjongo. Enye yalezi zinqubo bekuwukugcina amandla elanga ngokuwasebenzisela ukupompa...
I-Solar Energy - Ihlinzeka Kanjani Ngezinzuzo Ezimangalisayo Kubantu
Amandla elanga akhiqizwa ngokusebenzisa amandla eLanga. Amandla elanga asetshenziswa ngosizo lweseli ye-photovoltaic. Amayunithi e-PV ekuqaleni ayesetshenziselwa ukusebenzisa izinto zikagesi ezincane ezifana nesibali kodwa ngokuhamba kwesikhathi lawa mayunithi athole ukusetshenziswa ezindlini, emikhakheni yebhizinisi…
Izizathu Ezi-10 Zokwamukela Ukudluliswa Komsebenzi
Umphathi wakho uze kuwe mayelana nethuba lomsebenzi omusha. Kodwa okuwukuphela kwento ukuthi lo msebenzi ukude futhi lokho kusho ukuthi wena nomndeni wakho kuzodingeka nithuthe. Ukwenza umnyakazo kuyinto eyodwa, kodwa awunasiqiniseko sokuthi...
Imiphumela Eyingozi Ye-EMI Emvelweni
Ngenxa yentuthuko yethu kwezobuchwepheshe, iplanethi yethu iyafa. Kule ndaba endala yeFrankestein yanamuhla, singcolisa imvelo, kungaba ngokwazi noma ngokungazi. Isibonelo salokhu amagajethi amaningi esiwasebenzisayo. Ungazizwa kanjani uma singakutshela…
Izinto Ongazibheka Uma Wengeza Ama-Solar More Panels Ku-System Yakho Ekhona
Ngabe ucabanga ukufaka amanye amaphaneli elanga ekhaya lakho laseTampa? Kuyiqiniso ukuthi idolobha lijabulela ukukhanya okukhulu kwelanga unyaka wonke, kepha ukuthi ungasithuthukisa kalula kangakanani isistimu yakho elanga ekhona kuncike ezintweni eziningi. Uma kukhulunywa ngelanga…
Amandla Elanga, Amandla Namaphaneli - Izinto Ezenza Isolar Power System
Izinhlelo zamandla elanga zisanda kuvela njengenye yezinto ezinhle kakhulu ezisungulwe ezikhathini zamuva. Uhlelo lusebenzisa amandla elanga ukukhiqiza ugesi, ongasetshenziswa ukukhanyisa indlu yakho. Lo mshini uphinde usebenzise amandla kusuka elangeni ukufudumala…
1 2 3 ... 35 Olandelayo
Kukhona labo abakholelwa ukuthi impilo lapha yaqala laphaya… kude nomkhathi, nezizwe zabantu okungenzeka ukuthi babengokhokho baseGibhithe noma amaToltec noma amaMeya. Abanye bakholelwa ukuthi kusengaba khona abafowabo babantu abathi namanje balwele ukusinda kwenye indawo ngaphesheya kwamazulu.
Lo mlayezo wephutha ubonakala kuphela kuma-admins e-WordPress
Iphutha: Akukho okuphakelayo okutholiwe.
Sicela uye ekhasini lezilungiselelo zokuphakelayo kwe-Instagram ukuze udale okuphakelayo.